ဒူဒူကြီး: 'Basic shaft alignment'
ငယ်ငယ်ကတော့ သံဖြတ်လွှ handsaw blade ရဲ့ ပြင်ညီ plane ဖက်အခြမ်းကို shaft coupling တွေပေါါတင်၊ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးထိုးပြီး gap တိုင်းကာ alignment လေး ဘာလေး ချိန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တခါတလေမှာတော့ သံပေတံ steel ruler ကိုသုံးကာ၊ alignment ချိန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီနည်းတွေဟာ အချင်း diameter အရွယ်အစားတူတဲ့ shaft coupling တွေအတွက်၊ အဆင်ပြေပေမယ့် အရွယ်အစားမတူတဲ့ shaft coupling တွေကို၊ 'alignment' ချိန်ညှိရာမှာ သုံးလို့ မရတာတွေ့ရပါတယ်။
shaft alignment ဆိုတာကတော့ motor, generator, pump, compressor နဲ့ transmission gear box အစရှိတဲ့ machinery တွေကို၊ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ချိတ်ဆက်တတ်ဆင် အသုံးပြုထားတဲ့ shaft သို့မဟုတ် ဝင်ရိုးတွေရဲ့ အဆက် 'couplings' တွေဟာ၊ ပုံမှန်လည်ပတ် မောင်းနှင်နေတဲ့ normal operating conditions အခြေအနေမှာ၊ လည်ပတ်မှုဗဟိုဆုံချက် အနေအထား 'rotational center position' အနေနဲ့ co-linear အဖြစ် "ချိန်သားကိုက်စွာ တညီတညွတ်တည်း၊ လိုက်ပါလည်ပတ်နေခြင်း" ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. total indicator reading
သေခြာမှန်ကန်တဲ့ proper shaft alignment ကို၊ coupling hubs သို့မဟုတ် shafts တို့မှတဆင့် 'TIR' လို့ခေါါတဲ့ total indicator reading အနေနဲ့ မဆောင်ရွက်သင့်ပဲ၊ shaft supporting members တနည်းအားဖြင့် shaft ကို 'ထမ်းမ' ပေးထားတဲ့ bearings တွေရဲ့ rotational center မှသာ၊ တိုင်းတာ ညှိနှိုင်းပေးသင့်ပါတယ်။ shaft တွေရဲ့ rotational center positions တွေဟာ co-linear အနေနဲ့ ချိန်သားကိုက်စွာ တညီတညွတ်တည်း၊ လိုက်ပါလည်ပတ်မှုမရှိခြင်းကို "သွေဖီမှု" တနည်းအားဖြင့် "misalignment" လို့ခေါါကာ၊ offset misalignment နဲ့ angular misalignment ဆိုပြီး၊ ထပ်မံခွဲခြား သတ်မှတ်ပါတယ်။
Fig. offset misalignment - shaft center lines are parallel but do not intersect
rotational center မှာ၊ shaft center line တွေတခုနဲ့တခု အပြိုင် parallel ဖြစ်ပေါါနေပြီး၊ intersect အနေနဲ့ တထပ်တည်းကျကာ၊ ဖြတ်သန်းသွားမှုမရှိခြင်းကို 'offset misalignment' အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ offset misalignment ကို 'parallel misalignment' လို့လည်းခေါါပါတယ်။ coupling center မှတိုင်းတာခြင်း တနည်းအားဖြင့် shaft ရဲ့ rotational center positions မှတိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ unit အနေနဲ့ 'mils' ဖြင့်ဖော်ပြသလို၊ 1 mil ဟာ 0.001 inch နဲ့ညီမျှပါတယ်။
Fig. angular misalignment - shaft center lines intersect but are not parallel
shaft တွေရဲ့ မတူညီတဲ့ difference slop တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ ကွာဟချက် "gap" သို့မဟုတ် "face" တို့ကြောင့် angular misalignment တွေပေါါပေါက်ရပါတယ်။ rotational center မှာ၊ shaft center line တွေ တခုနဲ့တခု intersect အနေနဲ့ တထပ်တည်းကျကာ၊ ဖြတ်သန်းသွားပေမယ့်၊ အပြိုင် parallel ဖြစ်ပေါါမှု မရှိခြင်းကို၊ angular misalignment အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ angular misalignment ကို slope ofaroof ဆိုတဲ့ "rise/ run" ဖြင့်တိုင်းတာပါတယ်။ 'rise' ရဲ့ unit ဟာ 'mils' ဖြစ်ပြီး၊ 'distance along the shaft' ဆိုတဲ့ 'run' ရဲ့ unit ကတော့ 'inch' ဖြစ်ပါတယ်။
offset misalignment နဲ့ angular misalignment တို့မှာ horizontal plane ဆိုတဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် ဘယ်နဲ့ ညာသွေဖီမှု side to side potential misalignment နဲ့ vertical plane ဆိုတဲ့ အထက်နဲ့ အောက်သွေဖီမှု up and down potential misalignment တွေ၊ ဖြစ်ပေါါလေ့ရှိပါတယ်။ သေခြာမှန်ကန်တဲ့ proper shaft alignment ကိုရရှိစေရန်၊ 'HA' လို့ခေါါတဲ့ horizontal angularity alignment, 'HO' လို့ခေါါတဲ့ horizontal offset alignment, 'VA' လို့ခေါါတဲ့ vertical angularity alignment နဲ့ 'VO' လို့ခေါါတဲ့ vertical offset alignment တို့ကို၊ တိုင်းတာပြီး လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပေးရပါတယ်။
horizontal angularity misalignment ဆိုတာကတော့ shaft တချောင်းနဲ့၊ အခြား shaft တချောင်း
တို့ရဲ့ ကြားမှာ၊ အစောင်းဒီဂရီတခု ဖြစ်ပေါါကာ၊ horizontal plane အနေနဲ့ လည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်သလို၊ vertical angularity alignment ကတော့ shaft တချောင်းနဲ့၊ အခြား shaft တချောင်းတို့ရဲ့ ကြားမှာ၊ အစောင်းဒီဂရီ တခုဖြစ်ပေါါကာ၊ vertical plane အနေနဲ့ လည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ horizontal offset misalignment ဆိုတာကတော့ shaft တချောင်းနဲ့၊ အခြား shaft တချောင်းတို့ဟာ moved horizontally away အနေအထားဖြင့် ကွာဟကာလည်ပတ်နေပြီး၊ vertical offset misalignment ဆိုတာကတော့ shaft တချောင်းနဲ့၊ အခြား shaft တချောင်းတို့ဟာ moved vertically away အနေအထားဖြင့် ကွာဟကာ လည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအနေနဲ့ motor, generator, pump, compressor နဲ့ transmission gear box အစရှိတဲ့ machinery တွေ တခုနဲ့တခု ချိတ်ဆက်ပြီး၊ မောင်းနှင်အသုံးပြုရာမှာ၊ ထားရှိသင့်တဲ့ shaft alignment tolerances တန်ဘိုးတွေကို၊ ကြားခံချိတ်ဆက်ပေးမယ့် coupling manufacturers ထုတ်လုပ်သူတွေမှ design specifications အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ အသုံးပြုရာမှာ၊ သက်ရောက်လာမယ့် forces resulting တွေအတွက်၊ ကြိုတင်စဉ်းစားကာ၊ angular misalignment ကို3degrees ခန့်၊ offset misalignment ကို 75 mils တနည်းအားဖြင့် 0.075 inch ခန့်၊ "လိုတိုးပိုလျှော့" တနည်းအားဖြင့် "tolerances" အဖြစ် ထည့်သွင်းတွက်ချက်လေ့ ရှိပါတယ်။ flexible coupling တွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ သေးငယ်တဲ့ သွေဖီမှု small amounts of shaft misalignment တွေရှိတတ်ပါတယ်။
Fig. typical tolerances for alignment
တခါတရံ coupling manufacturers ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ၊ design specifications အနေနဲ့ 'gap tolerance' ကို သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ gap tolerance ကို absolute value of coupling face TIR လို့လည်းခေါါပါတယ်။ အကယ်၍ specification မှာ "face TIR not to exceed 0.005 in." လို့ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့လျှင်၊ 'gap tolerance' ဟာ 0.005 in ထက် မပိုသင့်ဖူးလို့ သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ နမူနာအနေနဲ့ ထားရှိသင့်တဲ့ tolerances တန်ဘိုးပမာဏတွေကို၊ လည်ပတ်နှုံး 'RPM' အလိုက်၊ ခွဲခြားဖော်ပြထားပါတယ်။ 'tolerance' တွေ ထားရှိရခြင်းကတော့ harmonic forces အဖြစ် အလိုက်သင့်သက်ရောက်လာမယ့် force ကို၊ ခံနိုင်ရှိရန်ဖြစ်ပါတယ်။
shaft တွေမှာ misaligned ဆိုတဲ့ သွေဖီမှုတွေရှိခဲ့လျှင်၊ forces တွေပေါါပေါက်လာပြီး၊ လည်ပတ်နေတဲ့ rotating components တွေမှာသာမက၊ အထိုင်ချထားတဲ့ stationary components တွေ တနည်းအားဖြင့် casing တွေ၊ housing တွေနဲ့ foundation mounting တွေအပေါါမှာ stresses အနေနဲ့ သက်ရောက်ပါတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် misaligned ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ stress ဟာ bearings တွေပေါါနဲ့ seals တွေ အပေါါမှာလည်း၊ သက်ရောက်ပါတယ်။ ပေါါပေါက်လာတဲ့ stress ဟာ harmonic forces အဖြစ် အလိုက်သင့်သက်ရောက်နေခြင်းမဟုတ်ပဲ၊ မြင့်မားတဲ့ greater stress ဖြင့် အဆက်မပြတ် constant hammering အနေနဲ့ သက်ရောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တလက်စတည်း shaft supporting members တနည်းအားဖြင့် shaft ကို 'ထမ်းမ' ပေးထားတဲ့ bearings တွေရဲ့ အသုံးခံနိုင်မှုသက်တမ်း "bearing life expectancy" အကြောင်းကိုလည်း၊ ထည့်သွင်းဖော်ပြပါစေ။ ball သို့မဟုတ် roller bearings တွေပေါါမှာ၊ shaft တွေရဲ့ misaligned ဆိုတဲ့ သွေဖီမှုတွေမှတဆင့်၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ forces တွေ သက်ရောက်တဲ့အခါ၊ bearings တွေရဲ့ အသုံးခံနိုင်မှု သက်တမ်းဟာလည်း၊ တိုတောင်းကျဆင်းသွားရပါတယ်။
Fig. bearing life is affected by misalignment
Fig. ball bearing and roller bearing's 90 % bearing life expectancy
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ 'bearing life is affected by misalignment' ပုံသေနည်းကတော့ bearing sizes အရွယ်အစားနဲ့ design ပေါါ မူတည်ပြီး၊ bearings တွေရဲ့ အသုံးခံနိုင်မှု သက်တမ်းကို၊ တွက်ချက်တဲ့ ပုံသေနည်းဖြစ်ကာ၊ (၁၉၄၀) နဲ့ (၁၉၅၀) ခုနှစ်ကာလများဆီက၊ Lundberg နဲ့ Palmgren ဆိုသူ (၂) ဦးရဲ့ လေ့လာ သုသေသနပြုချက်တွေ အရ၊ ပေါါထွက်ခဲ့တဲ့ ပုံသေနည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ball bearing နဲ့ roller bearing တို့ရဲ့ '90 % bearing life expectancy' ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းကို၊ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
Fig. shaft alignment options
shaft alignment ကို ချိန်ညှိဆောင်ရွက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းကရိယာ tools အပေါါမူတည်ပြီး၊ straight edge alignment, dial indicator alignment နဲ့ laser alignment ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ straight edge alignment ကတော့ သမရိုးကျ traditional alignment methods နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး၊ ညီညာဖြောင်းတန်းတဲ့ straightedge သို့မဟုတ် ပေတံ ruler တို့ကိုအသုံးပြုကာ၊ မျက်မြင် visual inspection အနေနဲ့ စစ်ဆေး ချိန်ညှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ quick and relatively easy ဆိုသလို လျှင်မြန် လွယ်ကူစွာ၊ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပေမယ့် တိကျမှန်ကန်မှု accuracy မရရှိနိုင်တာ၊ တွေ့ရပါတယ်။
dial indicator လို့ခေါါတဲ့ dial gauge တွေကိုသုံးပြီး၊ shaft alignment ကို ချိန်ညှိဆောင်ရွက်ခြင်း ဟာလည်း၊ သမရိုးကျ traditional alignment methods နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိကျမှန်ကန်မှုကို high accuracy အနေနဲ့ ရရှိပေမယ့်၊ quite time-consuming ဆိုသလို အချိန်ယူကာ၊ တိုင်းတာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သလို၊ dial gauge တွေကို နေရာရွှေ့ပြောင်းကာ တတ်ဆင်ပြီးမှ၊ တိုင်းတာရတဲ့အတွက် 'real-time values' တန်ဖိုးအားအတိအကျ၊ မရရှိနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။
Fig. laser alignment
laser alignment နည်းလမ်းကတော့ လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာ၊ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်သလို၊ တိကျမှန်ကန်မှုကို high accuracy အနေနဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ laser-guided tools အနေနဲ့ laser beam ကိုထုတ်ပေးမယ့် emitting unit, laser beam ကိုလက်ခံရယူမယ့် detecting unit နဲ့ handheld control device unit တို့ပါဝင်ပါတယ်။ emitting unit နဲ့ detecting unit တို့ကို၊ magnetic brackets သို့မဟုတ် magnetic chain တွေကိုအသုံးပြုပြီး၊ shaft မှာ mounted အနေနဲ့ တတ်ဆင် ရပါတယ်။ precise laser line ကို၊ emitting unit မှထုတ်စေပြီး၊ detecting unit မှလက်ခံရယူစေရန်၊ handheld control device unit ကို အသုံးပြုပါတယ်။ handheld control device unit ဟာ display unit ဖြစ်သလို၊ ချိန်ညှိနေစဉ် alignment process အတွင်း၊ real-time coupling and feet values တနည်းအားဖြင့် နေရာပြောင်းလဲတတ်ဆင်ရန် မလိုပဲ၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ simultaneously measure အနေနဲ့ တိုင်းတာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
Reference and image credit to : Maintenance Technology, Understanding Shaft Alignment, 01 December 2002 Rich Henry, Ron Sullivan, John Walden and Dave Zdrojewski, VibrAlign, Inc., The Importance of Shaft Alignment by Mark Ely & Karl Vietsch, Flow Control Magazine, November 30, 2011., http://www.vibrationschool.com/, http://pump-zone.com/, http://www.flowcontrolnetwork.com/, http://www.alignmentsystems.co.za/
Posted by ကိုထွန်း at 04:44